China Temperature Control LED Shower Head ထုတ်လုပ်သူများ - Huanyu Sanitary Ware
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ရေချိုးခေါင်း > LED Shower Head ၊ > အပူချိန်ထိန်း LED Shower Head
အပူချိန်ထိန်း LED Shower Head
ဤအပူချိန်ထိန်းချုပ် LED ရေပန်းခေါင်းသည် ဘက်ထရီမပါပါ၊ ရေစီးဆင်းမှုပါဝါထုတ်ပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ရေဖိအားအတွက် သင့်လျော်သည်၊ ရေသည် ပျော့ပျောင်းသည်၊ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ 120mm မျက်နှာကြီးသည် ရေချိုးခြင်းကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
လက်ကား Temperature Control LED Shower Head စျေးနှုန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်2နှစ်အာမခံဖြင့် အပူချိန်ထိန်း LED ရေချိုးခေါင်းကို အရည်အသွေးမြင့် chrome ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများကို 10 နှစ်ကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ သင်၏ရေရှည်လက်တွဲဖော် i ဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။n တရုတ်။
အပူချိန်ထိန်း LED ရေပန်းခေါင်း
1.6±0.05Mpa နှင့် 0.05±0.01Mpa၊ 1 မိနစ်ထားပါ၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိပါ။
အက်ဆစ်ဆားဖြန်းဆေးစမ်းသပ်မှု ‰¥ 24 သို့မဟုတ် 48 နာရီ
OEM & ODM ကိုကြိုဆိုပါသည်။
အပူချိန်ထိန်း LED ရေချိုးခေါင်း၊
ထူးခြားချက်- အရောင်အလင်းသည် အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ပြီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၊ ဘက်ထရီမပါခြင်း၊ ရေစီးကြောင်းပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း။
လျှောက်လွှာ- အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဟိုတယ်တွင်ဖြစ်စေ အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်စေ ရေချိုးခန်းသုံး ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းအားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။
ABS ပလပ်စတစ်အသစ်၊ အဆိပ်မရှိသော၊ ကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကောင်းမွန်သောပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်မှု
Multi-function ခြောက်ချက် ချိန်ညှိမှု၊ ဂီယာလှော်ကို ညင်သာစွာ လှန်ပါ၊ မတူညီသောမုဒ်များကို အလိုအလျောက် ပြောင်းပါ။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ interface အရွယ်အစား။
ACS, SASO, ETC. ကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထပ်မံလိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကူအညီပေးရန် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုအရ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါမည်။
1. လေယာဉ်ဖြင့် ညွှန်ပြထားသော လေဆိပ်သို့ သွားပါ။
2. ဖော်ပြထားသောလိပ်စာသို့ Express (FedEx၊ UPS၊ DHL၊ TNT၊EMS) ဖြင့်။
2. ပင်လယ်ဖြင့်၊ ညွှန်ပြထားသော ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းဆီသို့။
မေး။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံလည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Hangzhou Bay ပင်လယ်ဖြတ်ကူးတံတားနှင့် အလွန်နီးကပ်သော Ningbo တွင်တည်ရှိသော Cixi၊ Hangzhou မှ ကားဖြင့် 1 နာရီ နှင့် Shanghai မှ2နာရီ ကြာသည်။
မေး။ တောင်းဆိုမှုတွေရှိပါသလား၊ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှထိုကဲ့သို့သော designã€ soratchã€ ယိုစိမ့်မှုနှင့်ပက်ကေ့ခ်ျပြဿနာရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါမည်။
အကယ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ ပြဿနာရှိနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Fall Down Test အစီရင်ခံစာကို ပို့ဆောင်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီအတွက် တောင်းဆိုမှုကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများရှိပါက၊ သင်၏ပုံ သို့မဟုတ် vedio အဖြစ် နောက်အမှာတွင် အစားထိုးရန်အတွက် ပေးပို့ပါမည်။
Q.ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုသေချာအောင် လုပ်မလဲ။
ပစ္စည်းအာမခံချက်ï¼š ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် 757/707 လတ်ဆတ်သော ABS ပလပ်စတစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။
မျက်နှာပြင် အာမခံချက်- ခြစ်ရာများ ကင်းဝေးစေရန် 100% စစ်ဆေးခြင်း ၊ အစွန်းအထင်းများ မပါရှိဘဲ မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းစေပါသည်။
အသုံးပြုမှုအာမခံချက်- 0.5MPa ရေဖိအားအောက်တွင် စမ်းသပ်ပါ၊ ရေချိုးခေါင်းတိုင်းသည် ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ဘေးကင်းကြောင်း အာမခံချက်- ပစ္စည်းမှ ရေညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် ကျန်းမာသော ABS နှင့် ရော်ဘာပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါ။
ဖောက်သည်အား အခမဲ့နမူနာကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေနပ်မိပါသည်၊ သေးငယ်သော အစမ်းအမှာစာကိုလည်း လက်ခံပါသည်၊ သို့သော် သင်သည် ပို့ဆောင်ခကို တတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပြီး အော်ဒါတင်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: အပူချိန်ထိန်းချုပ် LED ရေချိုးခန်းခေါင်း, ထုတ်လုပ်သူများ, လက်ကား, တရုတ်, စျေးနှုန်း, စက်ရုံ, ပေးသွင်းသူများ